Iindawo ezimnandi zokundwendwela kuhambo lwakho lokuZazisa | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Iindawo ezimnandi zokundwendwela kuhambo lwakho lokuZazisa
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 18/06/2021)
Ukucwangcisa uhambo lwedwa unokuba uxakekile nokuba ungumhambi onamava, ngakumbi xa kufikwa ekukhetheni indawo elungileyo yokundwendwela kunye nemisebenzi elungileyo oza kuthatha inxaxheba kuyo ngelixa ulapho. Kodwa okona kubaluleke kakhulu, kuba ufuna ukuyenza ngeyona ndlela ilungileyo yokuzifumanisa ngokwakho.
Ukuba wedwa endleleni kukuvumela ukuba undwendwele naphi na apho ufuna khona nanini na ufuna, ngaphandle kokuhambelana neshedyuli yomnye umntu. kwakhona, ungazicelomngeni ngakumbi ngokuba phakathi kwabantu ongabaziyo, ekhulisa ukuzithemba kwakho, kanye Yebo, ukuzikhulisa.
Oko bekutshiwo, Ngaba unayo indawo oya kuyo engqondweni ngohambo lwakho lokuzifumanisa? Eli nqaku libalaselisa 7 kwezona ndawo zimnandi zokundwendwela wedwa.
1. Iindawo zokundwendwela kuhambo lwakho lokuzifumanisa: Ostreliya
I-Australia yindawo ekuphupha kuyo uninzi lweentlobo ezahlukeneyo ngenxa yayo amathuba okudilika angenasiphelo Zombini kubantu abahlukeneyo abanamava kunye nabanamava. Kwaye nokuba awukulungelanga ukuntywila, Uya kuba nexesha elimnandi lokufumanisa ubuncwane obuninzi obufihliweyo ilizwe elinikezela ngalo. I-Australia ikwalikhaya kwezona zinto ziphelayo okanye iintlobo zezilwanyana ezisengozini, ke uya kuba nethuba elinqabileyo lokunxibelelana neefosili ezineminyaka ezizigidi ezikufuphi.
Kodwa akukho nanye kwezi zinto zichaziweyo sesona sizathu siphambilinyana kutheni sibeke iAustralia njengeyona ndawo iphambili yabahambi bodwa. Izizathu eziphambili luxolo lwelizwe olungunaphakade, inokuthenjwa izithuthi zikawonke wonke, kunye neenketho zokuhlala ezinamaxabiso aphantsi. Uya kukhuseleka e-Australia.
Inkcubeko apha ityebile kwaye ukutya kumnandi, ke uya kuba neetoni zokutya kunye nezinto ezinxulumene nenkcubeko oza kuzihlola kwaye ufunde ebantwini balapho ukuba uya kuba nexesha lokugcina. Indawo yokuhlala kunye nezothutho zibiza kakhulu apha, Ungayichazanga indlela efikeleleka ngayo Bangkok ivela kuzo zonke iimbombo zomhlaba. Kwaye ukuba ingqondo yakho ixhalabile okanye ikhathazekile, ungahlala uphuma etempileni okanye kwiziko lokucamngca kwaye ucamngce.
3. Iindawo zokundwendwela kuhambo lwakho lokuzifumanisa: England
Iminyaka embalwa emva, ILondon yayisesona sixeko sihamba rhoqo ehlabathini ngabakhenkethi abahamba bodwa. Oko kukodwa kufanele kukuxelele ukuba le yindawo ekhuselekileyo ukuba ungabinayo inkampani. Ibhotwe laseBuckingham Okwangoku yeyona nto inomtsalane kwabahambi bodwa, kodwa ayisiyiyo kuphela eLondon. Ukuba ufuna ukubona ezona zinto zinomtsalane ngexesha elimiselweyo, vele ujoyine iLondon ukhenketho lokuhamba simahla xa undwendwela isixeko kwixesha elizayo.
4. Nyu Zilend
Ngaba uyakonwabela ukuqhuba wedwa imigama emide? Uninzi lwabahambi bodwa bayayithanda iNew Zealand ukhetho lokuqhuba iyavumelana nabo. Into oyifunayo kukuqasha inkampu okanye imoto eqhelekileyo kwaye uye apho iindlela zikusa khona. Oku yi ilizwe elihle ukuba ukuhlola. Abantu basekuhlaleni nabo bayamkela kwaye baluncedo nanini na xa ufuna uncedo.
5. Iindawo zokundwendwela kuhambo lwakho lokuzifumanisa: Peru
Phantse yonke indawo entsha utyelelo lwakho lukhethekileyo kwiseti ethile yezizathu, kodwa iPeru lelinye lamazwe avele gca. Le ndawo ibothuse abantu abaninzi ngobuhle bayo bendalo kunye nobuncwane bayo, ukuba abantu abanakufumana nje ngokwaneleyo. Its ubutyebi bembali, ezintabeni, nenkcubeko yemveli, ezinomdla kuzo zonke iindwendwe. Ngaloo ndlela, ukufumana bonke ubuncwane bayo besizwe, thatha ukhenketho ePeru, kwaye uqhelane nelizwe.
I-US yahlukile, ke ngekhe uzive ungaphandle kwendawo nokuba uvelaphi. Ilizwe likhulu kakhulu kwaye linayo yonke into oyifunayo ukuze ube ziintaba, zokulondoloza, izilwanyana zasendle, okanye iilwandle. Ukuthetha ngeelwandle, kufuneka undwendwele iFlorida ngexesha elizayo xa use-USA kwaye uqubha kwisanti emhlophe. Ngaphezu, Disney inokuba yeyona ndawo ifanelekileyo kuhambo lwakho lokuzikhulisa njengoko kuya kukuthatha ubuye ukhumbule ubuntwana bakho, kwaye nostalgia encinci ekrakra ayizange yenzakalise mntu. Kwaye ukuba into oyifunayo lixesha lokuthula lodwa, ungahlala uhlala kwi irente yeholide kude nezihlwele.
7. Iindawo zokundwendwela kuhambo lwakho lokuzifumanisa: Japhan
IJapan ziimayile ngaphambili kwamanye amazwe ngokubhekisele kwitekhnoloji. Ukuba ungumxhasi wezoqoqosho okanye utyalomali, Ukuphonononga amathuba oshishino anesi sixeko ngokuqinisekileyo kuya kukuvuyisa. Eli lizwe likwalikhaya leetempile ezintle, iihotele ezikumgangatho ophezulu, neendawo zokutyela, kunye nobuncwane bendalo obufihlakeleyo baseAsia. Yintoni egqithisile, iinkqubo zothutho ezifanelekileyo apha ziya kwenza uhambo lwakho lodwa lube mnandi kwaye lungabinangxaki. Ukuba ungumthandi womculo, Ungazisa ilaptop yakho kunye neyakho Isoftware yokwenza umculo ukuvumela impembelelo ikubethe kwaye mhlawumbi uvelise ezinye izandi ezithandekayo ukufuzisela iihambo zakho wedwa.
EMunich ukuya eSalzburg Ngoololiwe
IVienna ukuya eSalzburg ngoLoliwe
IGraz eSalzburg Ngoololiwe
ILinz iya eSalzburg Ngoololiwe
Zininzi izinto zokwenza kunye nokufunda eMalaysia, kodwa eyona nto inomdla malunga neli lizwe le-Southeast Asia lelokuba ipesenti enkulu yabemi ithetha isiNgesi. Oko kuthetha ukuba ngekhe ulahlekelwe yindlela yakho xa uhamba wedwa apha. Ilizwe lineelwandle, ezintabeni, iindawo zokuntywila, nayo yonke into oya kuyidinga ukuze uphumle kwaye wonwabele ubomi ngokwakho.
Ukubuyela umva kunye nokuhamba wedwa kuya kuthandwa ngumhla ngenxa yokuba bhetyebhetye kwabo. Wenza into elungileyo. Khawukhumbule nje ukuba ube nebhajethi eyaneleyo yokuhlala kwakho, ukudla, kunye nezidingo zothutho kuba kufuneka uzimele ngokwakho ukuba uza kukonwabela ukuzihambela kwakho kokufumanisa ngokwakho.
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise Iindawo zakho zokuzonwabisa ukuze undwendwele kuhambo lwakho lokuzifumanisa ngololiwe.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iindawo zokuzonwabisa zokundwendwela kuhambo lwakho lokuzifumanisa" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Ffun-places-visit-self-discovery-trip%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)